အကာအကှယျမရှိဘဲ လိငျဆကျဆံမိခဲ့ရငျ မဖွဈမနေ သိထားရမယျ့ အခကျြ (၅)ခကျြ - For her Myanmar
အကာအကှယျမရှိဘဲ လိငျဆကျဆံမိခဲ့ရငျ မဖွဈမနေ သိထားရမယျ့ အခကျြ (၅)ခကျြ
ကိုယျတိုငျကွုံမှဆိုတာထကျ ဗဟုသုတအနနေဲ့ သိထားသငျ့တယျနျော။
မထငျမှတျထားတဲ့ အခြိနျမှာ အစီစဉျထားတဲ့ ကိစ်စတှဖွေဈလာရငျ အငျမတနျ စိတျညဈရပါတယျ။ ဒီထဲမှာမှ အခွအေနအေရ သှေးသားလှုပျရှားမှုတှအေရ အမှတျမထငျ လိငျဆကျဆံမိသှားတယျ။ အတူနမေိသှားတယျ။ အဲ့ထဲကမှ မစီစဉျထားတဲ့အခါကတြော့ ကှနျဒုံးလညျး မပါဘဲ အကာကှယျမဲ့ခြိနျ ဆကျဆံမိသှားတယျဆိုရငျ ယောငျးတို့ စိတျအေးအေးနဲ့ ဘာတှလေုပျသငျ့တယျဆိုတာလေးကို ပွောပွခငျြပါတယျ။ သှေးပူနမှောမို့ ဘယျက ဘယျလိုစလုပျရမှနျးမသိ မဖွဈရလအေောငျ အခြိနျလေးတှနေဲ့ ဘာလုပျသငျ့တယျဆိုတာ အကွံပေးပါရစနေျော။
၁။ လိငျဆကျဆံပွီး မိနဈ ၃၀အတှငျး ဖွဈနိုငျရငျ လိငျဆကျဆံပွီးပွီးခငျြး ဆီးသှားလိုကျပါ။ ဒီလို ဆီးသှားလိုကျခွငျးဟာ လိငျဆကျဆံခွငျးကွောငျ့ ကူးနိုငျတဲ့ ဆီးပူ၊ ဆီးကဉျြ၊ ဆီးလမျးကွောငျး ပိုးဝငျနိုငျခွကေို လြော့နညျးစပေါတယျ။
၂။ လိငျဆကျဆံပွီး ၇၂ နာရီအတှငျး(ရကျနဲ့တှကျရငျ ၃ရကျအတှငျး)မှာ အရေးပျေါတားဆေးကို သောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။ စောစောသောကျနိုငျရငျ အကောငျးဆုံးဆိုပမေဲ့ သှေးပူပွီး မသောကျမိရငျတောငျ ၇၂နာရီအတှငျး သောကျဖွဈအောငျ သတိထားပေးပါ။ အရေးပျေါတားဆေးဟာ မလိုခငျြတဲ့ကိုယျဝနျကို တားပေးနိုငျစှမျးဟာ ၉၈%ကြျောရှိလို့ အတျောစိတျခရြတယျ ပွောရမှာပါ။ သောကျလို့ အနျထှကျသှားတယျဆိုရငျ နောကျတဈကွိမျ ပွနျသောကျပေးရမှာပါ။
Related Article >>> Anal sex နဲ့ လိငျမှုသုခ
၃။ အရေးပျေါတားဆေးကိုလညျး ၃ရကျအတှငျးမသောကျမိဘူး။ ကိုယျဝနျယူဖို့လညျး လုံးဝမဖွဈနိုငျသေးဘူးဆိုရငျ ယောငျးတို့အတှကျ နညျးလမျးတဈခုရှိပါသေးတယျ။ ဒါကတော့ လိငျဆကျဆံပွီး ၅ ရကျအတှငျး သားဆကျခွားနညျး တဈမြိုးဖွဈတဲ့ သားအိမျထဲ IUD ထညျ့တာပါ။ ဒီလို IUD ထညျ့လိုကျခွငျးဟာ မလိုခငျြတဲ့ ကိုယျဝနျကို ၉၉%ထိ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျတဲ့။
၄။ လိငျဆကျဆံပွီး ၂ပတျကွာရငျ လိငျကတဈဆငျ့ ကူးစကျတတျတဲ့ ရောဂါတှအေတှကျ သှေးစဈဆေးမှု ပွုလုပျပါ။ ကိုယျ့အဖျောကို ယုံသငျ့၊မယုံသငျ့ကိစ်စကို မပွောလိုပါဘူး ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးအတှကျ တခြို့ကိစ်စတှကေ ကွိုတငျစဈဆေးထားတာ အကောငျးဆုံးမို့ပါ။ စဈဆေးသငျ့တဲ့ ရောဂါတှကေတော့ အသညျးရောငျ ဘီပိုး၊စီပိုး ၊ HIV ၊ ကာလသားရောဂါပိုးတှေ ဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> အရေးပျေါတားဆေး မကွာခဏသောကျလြှငျ
၅။ လိငျဆကျဆံပွီး ၃ပတျကွာရငျ ကိုယျဝနျရှိမရှိ ဆီးစဈသငျ့ပါတယျ။ ဒီထကျစောစောစဈရငျ HCGဟျောမုနျးပမာဏနညျးပွီး ကိုယျဝနျရှိနမှေနျး မပျေါတာမြိုးဖွဈတတျလို့ပါ။ ၃ပတျအကွာမှာ စစဈလို့ရပွီး ၄ပတျမွောကျ ၅ပတျမွောကျမှာလညျး ရာသီမလာသေးရငျ ဆကျလကျစဈဆေးသငျ့ပါတယျ။
အကာကှယျမဲ့လိငျဆကျဆံမိရငျ ဒီအဆငျ့ ၅ဆငျ့ကို မဖွဈမနေ သိထားသငျ့ပါတယျနျော.. မတျောတဆ ဆိုတာ ခဏ ခဏဆိုရငျ အန်တရာယျမြားတာမို့ နောငျအခြိနျမြားအတှကျတော့ အကာကှယျနဲ့ဆကျဆံဖို့ မမပေ့ါနဲ့ ယောငျးတို့ရေ..
ကိုယ်တိုင်ကြုံမှဆိုတာထက် ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိထားသင့်တယ်နော်။
မထင်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ မစီစဉ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်လာရင် အင်မတန် စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ အခြေအနေအရ သွေးသားလှုပ်ရှားမှုတွေအရ အမှတ်မထင် လိင်ဆက်ဆံမိသွားတယ်။ အတူနေမိသွားတယ်။ အဲ့ထဲကမှ မစီစဉ်ထားတဲ့အခါကျတော့ ကွန်ဒုံးလည်း မပါဘဲ အကာကွယ်မဲ့ချိန် ဆက်ဆံမိသွားတယ်ဆိုရင် ညီမလေးတို့ စိတ်အေးအေးနဲ့ ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ သွေးပူနေမှာမို့ ဘယ်က ဘယ်လိုစလုပ်ရမှန်းမသိ မဖြစ်ရလေအောင် အချိန်လေးတွေနဲ့ ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ အကြံပေးပါရစေနော်။
၁။ လိင်ဆက်ဆံပြီး မိနစ် ၃၀အတွင်း ဖြစ်နိုင်ရင် လိင်ဆက်ဆံပြီးပြီးချင်း ဆီးသွားလိုက်ပါ။ ဒီလို ဆီးသွားလိုက်ခြင်းဟာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ကူးနိုင်တဲ့ ဆီးပူ၊ ဆီးကျဉ်၊ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်နိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
၂။ လိင်ဆက်ဆံပြီး ၇၂ နာရီအတွင်း(ရက်နဲ့တွက်ရင် ၃ရက်အတွင်း)မှာ အရေးပေါ်တားဆေးကို သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ စောစောသောက်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးဆိုပေမဲ့ သွေးပူပြီး မသောက်မိရင်တောင် ၇၂နာရီအတွင်း သောက်ဖြစ်အောင် သတိထားပေးပါ။ အရေးပေါ်တားဆေးဟာ မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ကို တားပေးနိုင်စွမ်းဟာ ၉၈%ကျော်ရှိလို့ အတော်စိတ်ချရတယ် ပြောရမှာပါ။ သောက်လို့ အန်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်သောက်ပေးရမှာပါ။
Related Article >>> Anal sex နဲ့ လိင်မှုသုခ
၃။ အရေးပေါ်တားဆေးကိုလည်း ၃ရက်အတွင်းမသောက်မိဘူး။ ကိုယ်ဝန်ယူဖို့လည်း လုံးဝမဖြစ်န်ိုင်သေးဘူးဆိုရင် ညီမလေးတို့အတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ လိင်ဆက်ဆံပြီး ၅ ရက်အတွင်း သားဆက်ခြားနည်း တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ သားအိမ်ထဲ IUD ထည့်တာပါ။ ဒီလို IUD ထည့်လိုက်ခြင်းဟာ မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ၉၉%ထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။
၄။ လိင်ဆက်ဆံပြီး ၂ပတ်ကြာရင် လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေအတွက် သွေးစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပါ။ ကိုယ့်အဖော်ကို ယုံသင့်၊မယုံသင့်ကိစ္စကို မပြောလိုပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက် တချို့ကိစ္စတွေက ကြိုတင်စစ်ဆေးထားတာ အကောင်းဆုံးမို့ပါ။ စစ်ဆေးသင့်တဲ့ ရောဂါတွေကတော့ အသည်းရောင် ဘီပိုး၊စီပိုး ၊ HIV ၊ ကာလသားရောဂါပိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> အရေးပေါ်တားဆေး မကြာခဏသောက်လျှင်
၅။ လိင်ဆက်ဆံပြီး ၃ပတ်ကြာရင် ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ ဆီးစစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီထက်စောစောစစ်ရင် HCGဟော်မုန်းပမာဏနည်းပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိနေမှန်း မပေါ်တာမျိုးဖြစ်တတ်လို့ပါ။ ၃ပတ်အကြာမှာ စစစ်လို့ရပြီး ၄ပတ်မြောက် ၅ပတ်မြောက်မှာလည်း ရာသီမလာသေးရင် ဆက်လက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အကာကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိရင် ဒီအဆင့် ၅ဆင့်ကို မဖြစ်မနေ သိထားသင့်ပါတယ်နော်.. မတော်တဆ ဆိုတာ ခဏ ခဏဆိုရင် အန္တရာယ်များတာမို့ နောင်အချိန်များအတွက်တော့ အကာကွယ်နဲ့ဆက်ဆံဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ညီမလေးတို့ရေ..
Tags: condom, do, Health, Intercourse, Sex, steps, without
၂၀၁၉ ရဲ့ အော်စကာကို ဘယ်သူတွေ ရသွားတာလဲ??
မယ်တင် (ဆေး-၁) February 26, 2019